Abuu Muscab oo ka hadlay khasaaraha dagaalkii Gandarshe iyo Dhuusamareeb. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Abuu Muscab oo ka hadlay khasaaraha dagaalkii Gandarshe iyo Dhuusamareeb.
On Nov 7, 2020 367 0
Xili habeen hore ciidamo is garabsanaya oo katirsan Maraykanka iyo kuwa Soomaalida ah ay weerar kusoo qaadeen deegaanka Gandarshe ayaa weeraro ay la kulmeen ciidamadaasi waxaa ka warbixiyay Taliska Ciidamada xarakada shabaabul Mujaahidiin.
Afhayeenka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh Cabdalcasiis Abuu Muscab oo qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay ciidamada Kusoo duulay Gandharshe ay kasoo baxeen Muqdisho islamarkaana weerarka ugu horeeyay oo camaliyad naf hurnimo ahayd uu ku qabsaday duleedka Gandarshe halkaasi oo uu ku gaaray khasaaro.
Raadad badan oo muujinaya khasaaraha gaaray ciidamada ayaa lagu baahiyay baraha internetka sida ay horay ubalan qaadeen Taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin.
Dhinaca kale Ciidamada shisheeye iyo kuwa Dowladda ayaa labadii cisho ee lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday qeybo kamid ah Gobalka Galgaduud kadib markii ciidamo katirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay gaareen tuulooyin udhaw magaalada Dhuusa mareeb.
Abuu Muscab wuxuu shirkiisa jaraa’id kusoo hadal qaaday dagaallo khasaaro dhaliyay oo shalay ay la kulmeen ciidamada waday dhaqdhaqaaqyada Ciidan.
Halkan ka dhagayso shirka jaraa’id ee Abuu Muscab